Bang Saphan, Prachuap Kiri Khan, Thailand
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguIan
UIan unezimvo eziyi-62 zezinye iindawo.
I-Ban Krut, i-Bang Saphan, malunga ne-150 km kumazantsi e-Hua Hin kodwa inelona lwandle luthandekayo olungangcoliswanga sakha salubona. Besihamba ngesikhephe sisuka elunxwemeni, samisa, sawela indawo kwaye ngoku sirenta izindlu ezincinci ezi-3 ezikufutshane ne-200m ukusuka elunxwemeni. Izolile kwaye intle!
Izindlu ezintathu ezithandekayo ezikufutshane, amagumbi amabini okulala e-ensuite (enye kabini enye enye), ikhitshi, igumbi lokuhlambela leendwendwe, indawo yokutyela kunye neendawo zokuhlala ezinesofa ezitofo-tofo-indlu enye inegumbi elincinci ngokunjalo. Ifakwe kwi-200m ukusuka kulwandle olungachithwanga kwilali encinci eneendawo zokutyela ezinkulu zaselwandle kunye nentengiso entsha; Isikhululo sikaloliwe esidibanisa emantla ngeHua Hun ukuya eBangkok nasezantsi ukuya eMalaysia. I-idyllic ngokupheleleyo.
Ulawulo luhlala ezilalini kangangokuba luhlala lukhona!